"छैठौँ महोत्सवले नुवाकोट औद्योगिकीकरणमा जान सहयोग पुग्छ": ताराबहादुर कार्की | Trishuli Khabar - Trishuli News Network
अन्तर्वार्ता१५ माघ २०७६, बुधबार
ताराबहादुर कार्की, अध्यक्ष
छैठौँ नुवाकोट महोत्सवको विशेषता के हो ?
नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०लाई जोडेर कृषिको सम्भावनाको खोजी र कृषिमा लागेका उद्यमीलाई हौसला प्रदान गर्ने कृषि उद्योगको विकास गर्नको लागि महोत्सवले भूमिका निर्वाह गर्नेछ । नुवाकोटमा उद्योगको सम्भावना भर्खरै बढेको छ । त्यसलाई सार्थकता बनाउनको लागि पनि महोत्सवले भूमिका निर्वाह गर्नेछ । उद्योगपतिलाई पनि महोत्सवमा निम्ता दिएका छौँ । उहाँहरु आएर नुवाकोटको सम्भावनाहरुको खोजी गर्नुहुनेछ । अनि त्यसपछि लगानीको वातावरण बन्ने छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । महोत्सवले कृषि, पर्यटन, उद्योग, धार्मिक तथा ऐतिहासिक क्षेत्रहरुको पहिचानका साथै प्रचार प्रसार र नुवाकोट सम्भावना रहेका पूर्वाधार निर्माण्गर्न आउँदा नुवाकोटमा के के कुराको सम्भावना रहेको छ भनेर बुझ्न पाइन्छ । लगानीकर्ताहरुलाई सहज पनि हुन्छ ।
उद्योगको सम्भावना भर्खरै खुलेको भन्नुभयो कसरी ?
नुवाकोट काठमाडौंसँग जोडिएको हुँदाहुँदै पनि बाहिर जिल्लाबाट जिल्लामा लगानी गर्न डराउने अवस्था रहेको थियो । अहिले नुवाकोटमा पनि नुवाकोटका उद्यागी व्यवसायीहरुले लगानी गर्न चाहनु भएको छ । बाहिरका उद्योगीले बत्ति पानीको सुविधा र रसुवागढी ठोरी नाका सञ्चालनमा आएसँगै सम्भावना बढेर गएको छ । म निर्वाचित भएर आएसँगै यसतर्फ मैले धेरै पहल गरेको छु । यो पटक सफल हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ ।
नेपाल भ्रमण वर्षलाई कसरी सहयोग पुग्छ यो महोत्सवले ?
सरकारले निजी क्षेत्रको सहयोगको अपेक्षा गरी सँगै पर्यटन विकासमा अघि बढाएको छ । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० सफल पार्न सरकार मात्र होइन, सबै क्षेत्रको सहकार्यलाई अपरिहार्य बनाएको छ । पर्यटन सम्भावनाको खोजी गर्ने हिसावले यो महोत्सव निकै महत्वपूर्ण हुनेछ । हाम्रो धर्म, संस्कृति रितिरिवाज, नुवाकोटका धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको विकास एवं प्रचारप्रसारमा महोत्सवले ठूलो सहयोग पुग्नेछ भन्ने विश्वास मैले गरेको छु । नुवाकोटमा अहिले आन्तरिक पर्यटनको बढ्दो अवस्थालाई यहि महोत्सवहरुको पनि प्रमुख योगदान रहेको छ ।
यो महोत्सवमा विशेषगरी के हेर्न पाइन्छ ?
अहिले पहिलोदेखि पाँचौसम्म महोत्सव सञ्चालन गर्दा हामीले स्थानीय उत्पादन नै प्रर्दशनीमा राख्न खाजेका हाँै । पहिले स्थानीय तह थिएनन् । अहिले पाँचपाँचवटा स्टल निःशुल्क उपलब्ध गराएर उत्पादन भएका कृषि उपज राखिनेछ । र आउने पाहुनाले हेर्नेछन् र नुवाकोटको सम्भावनाहरु पत्ता लाग्नेछ । पृथ्वीनारायणको रुप धारण भएको लत्ताकपडा लगाएर इतिहास देखाउने छौँ ।
उद्योग वाणिज्य संघले महोत्सव मात्रै गर्छ व्यापारीको हकहित गर्दैन भन्ने आरोप छ नी ?
त्यो त भोलाजी, मन नपर्ने मान्छेको सास नै गन्हाउँछ रे । शरणउत्सुकले दुई पटकसम्म महोत्सव गरेर नुवाकोटमा इतिहास नै रच्नु भयो । तर, ती महोत्सवमा नाफा भएन बरु घाटा नै भयो । त्यसपछि राजन श्रेष्ठको पालामा भएको महोत्सवले केही फाइदा भयो । चौथौ महोत्सव मैले गर्दा बजारमा सुरक्षाको लागि सिसिटिभि राख्ने काम भएको छ । पाँचौ महोत्सव गर्दा भएको आम्दानीले हामीले नुवाकोट उद्योग वाणिज्य संघको भवन विस्तार गर्ने काम गरेका छौँ । पिपलटारमा हामीले जग्गा पनि किनेका छौँ । हिसाव कुनै अपरदर्शी छैन ।
महोत्सव मात्रै सञ्चालन गर्दा यसको महत्व घट्दैन र ?
होइन, हरेक वर्ष महोत्सव गर्दा महत्व घट्दैन बरु नुवाकोटको पहिचानमा थप प्रचारप्रसारमा थप सहयोग पुग्छ । हामीले अहिलेको महोत्सवलाई व्यापकतामा जोड दिएका छौँ । यसको महत्व बढाउनका लागि हामी प्रयासरत छौँ ।
महोत्सव मनोरञ्जन केन्द्रीत भयो भन्ने आरोप छ नी ?
मैले अघि पनि भनेँ पहिले भन्दा यो पटक महोत्सव फरक हुनेछ । कृषि क्षेत्र र नुवाकोटका कृषि प्रदर्शनीको मात्रै ६० वटा स्टल रहने छ । होत्सवमा स्वभाविक रुपमा रमाइलो पनि गरिन्छ । तर, सबै कार्यक्रम रमाइला मात्र छैनन् । रमाइलो हेर्न आउने आन्तरिक पर्यटकहरुले गर्ने आर्थिक क्रियाकलापले नुवाकोटलाई फाइदा पुग्छ । यस पटक हामीले नुवाकोटका उत्पादनहरुलाई खोजी खोजी स्थान दिन लागेका छौँ ।
यो महोत्सवमा कति फाइदा हुने अनुमान गर्नुभएको छ ?
महोत्सवबाट फाइदा भन्दा पनि नुवाकोटको औद्योगिकिकरणमा कस्तो योगदान दिन सक्यो ? कसरी फाइदा हुन सक्यो भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ । यस पटक एक लाख भन्दा धेरै अवलोकनकर्ता भित्र्याउनको लागि तयारी भइरहेको छ । हाम्रो उद्देश्य पूरा हुन्छ नै । ७७ जिल्लाबाट हामीले पाहुना बोलाएका छौँ । जिल्लाबाट आउने व्यावसायीहरुले नुवाकोट हेर्नुपर्छ, नुवाकोटमा लगानी बढाउनुपर्छ भनेर भन्नु भएको छ । त्यसैले हामीले सोचेभन्दा धेरै अवलोकनकर्ता नुवाकोट आउनुहुन्छ ।
यति धेरै अवलोकनकर्ता कसरी ल्याउनुहुन्छ ?
हामीले दर्शक आकर्षित गर्न धेरै आधारहरु तयार पारेका छौँ । महोत्सवमा हामीले स्थानीय उत्पादनहरुलाई प्राथमिकता दिने र प्रदर्शनीसहित विक्री गर्नेछौँ । जिल्लाका १२ वटा पालिकाबाट पाँच पाँच वटा स्टल राख्दा पनि त्यहाँ स्थानीय तहको पूर्ण प्रतिनिधित्व र प्रचारप्रसार हुन्छ । त्यसैले हामीले हाम्रो उद्देश्यले पूरा गर्देछौँ ।
अन्तमा नुवाकोटवासीलाई के भन्नुहुन्छ ?
यस पटक सबै गरेर दुई सय ५० स्टल रहने छ । छैठौ महोत्सव नुवाकोट उद्योग वाणिज्य संघको मात्र होइन, सबै सरकार निकाय, सरोकारवाला धर्म, संस्कृतिमा लागेका सबैको हो । सबै नुवाकोटवासीको महोत्सव हो भनेर सन्देश हामीले दिएका छौँ । निजी क्षेत्रको मात्र महोत्सव होइन । त्यसैले यो महोत्सव सफल बनाउन सबै पक्ष एक जुट हुनुपर्छ ।